Ifeanyi Ubah na ndị Igwe nọ n’ Anambra South enwee ọgbakọ | odumblog
Ifeanyi Ubah na ndị Igwe nọ n’ Anambra South enwee ọgbakọ
posted on Aug. 10, 2019 at 11:51 pm
Onye omeiwu na-anọchite anya Anambra South, bụ Dr. Patrick Ifeanyi Ubah (Ebubechukwu ụzọ Nnewi) na ndị Igwe na ndị nnọchite anya ọdịnaala obodo niile nọ n’Anambra South nwere ọgbakọ n’ụbọchị Satọde ọgọstụ 10, 2019.
Ọ gbara ndị obodo dị iche iche ọ na-anọchite anya ha ume ka ha na ibe ha biri n’udo. Ubah rịọrọ arịrịọ ahụ n’oge nzukọ ezumike nká Anambra South Traditional Rulers Forum nke mere na Eagle Destiny Hotel Ihiala. Mgbe ọ na-agwa ndị Eze okwu, Omeiwu Ifeanyi Ubah kwusiri ike na ọ bụ naanị na gburugburu ebe udo dị ka e nwere ike iwulite mmepe. Ọ gara n’ihu gbaa ha ume ka ha kwadoo udo dị na District ahụ n’agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ okpukperechi ha nwere ike ịdi iche iche. N’ikwu okwu n’ihe gbasara njem ụlọ omeiwu ya,, Ifeanyi Ubah kwusiri ike na ịkwalite ọdịmma nke ndị Igbo na ndị Naịjiria n’ozuzu ya ka bụ isi sekpụ ntị n’ọrụ ya n’ụlọ omeiwu. Ọ gwakwara ha banyere mbọ ya na-agba ịkwalite akụ na ụba dịka ngagharị ya nke na-adịbeghị anya maka ichebe ọdịmma ndị ọrụ ụgbọelu obodo anyị. Onye omeiwu Anambra South mere ka obi sie ha ike na mgbe ezumike ọgbakọ ụlọ omeiwu dị ugbu a gasịrị, na ya ga-ejikọ aka iji ezigbo ego gbara ọkpụrụkpụ kwado nzube a.
N’ịzaghachi Ebubechukwuzo Nnewi, ndị Eze kelere ya maka ike o jiri obere oge ọ nọrọla n’ ụlọomeiwu nke ukwu were kpaa. Ha kpekwaara ya ekpere ma rịọ Chineke ka o jiri amamihe na-agọzi ya iji mee ka ọ nọgide na-enye ndị mmadụ nnọchi anya dị mma.
Tags:Anambra southBBC Igbobbc newsbreaking newsCapital oilfcIfeanyi ubahifeanyi ubahIgbo blogIgbo Newslatestnewslive newsnewsOdumblogSahara ReportersSenateSenator Ifeanyi UbahTraditional rulers
odumblog August 10, 2019
NANS emechie Shoprite n’Ogun Steeti